SAMOTALIS: LA-TALIAYAHA MADAXWEYNHA EE DHAQAALAHA, GANACSIGA IYO MAALGASHIGA MUDANE AXMED CARWO OO TACSI U DIRAAYA REER YUUSUF DUCAALE
LA-TALIAYAHA MADAXWEYNHA EE DHAQAALAHA, GANACSIGA IYO MAALGASHIGA MUDANE AXMED CARWO OO TACSI U DIRAAYA REER YUUSUF DUCAALE
La-taliyaha Madaxweynha ee Dhaqaalaha, Ganacsiga iyo Maalgashiga Mudane Axmed Xasan Carwo, waxuu tacsi u dirayaa reer Yuusuf Ducaale isagoo ka tacsidaynaaya geerida ku timid DIIRIYE BOOBE YUUSUF DUCAALE. Waxuuna Alle uga baryayaa inuu marxuumka u naxariisto, dambigiisa dhaafo, qabriga u waasiciyo, ugana dhigo beer ka mid ah kuwa Janatul Fardaws.
Waxuuna si gaar ah ugu tacsideynayaa aabbo Boobe Yuusuf Ducaale, isagoo xusay damqashada geerida ku timid wiil aabihii noolyahay, oo ah mid La-taliyaha dhowaan soo martay. Waa se xaq oo qofna dhaafimaayo ayaantiisa, nin yaraan ku dhinta iyo nin gabow ku dhintaba.
Waxuu la-taliyahu ehel, waalid, walaal, hooyo iyo aabbo, ehel iyo asxaaba Alle uga baryayaa inuu waafajiyo Samir iyo duco.
La-taliyaha Madaxweynha SL ee